मेण्डलका नियम (Law of Mendel) भनेको के हो ?
मार्च 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments Mendel, मेण्डल
आफ्नो अनुसन्धानको लागि उनले मठको बगैचाको ३५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइ भू-भाग लिए । मेण्डलले विभिन्न ३४ थरीका पिसम स्याटिभमको केराउका प्रकारहरु छाने र त्यसको वंशाणुगत शुद्धताको परीक्षण कार्य थाले । उनले एक आपसमा अन्तरप्रजनन गराएर नश्ल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागे । उनले ८ वर्षभन्दा बढी अवधिमा २८००० केराउका बोटहरु लिई होसियारीपूर्वक योजनाबद्ध ढड्डले प्रयोगको माध्यमद्वारा अध्ययन अनुसन्धानलाइृ अगाडि बढाए । मेण्डलले अनुसन्धानप्रतिको झुकाव हुनु कारण उनको प्रकतिप्रतिको प्रेम थियो । रुखविरुवाहरुमा पाइने अनौठो र अमिल्दो गुणले मेण्डललाई आकर्षित गयो । उनले आफ्नो बगैँचामा हिडडुल गर्ने क्रममा अलंकारिक विरुवाहरुमा विविधता भएको र अनौठो र आश्चर्य लाग्दो गुण महसुस गरे ।
← विज्ञान जगतमा मेण्डलको योगदान के रहेको छ ?
भिटामिन ‘डी’ के सुर्यको किरणसंगै आउछ त? →
विधि विज्ञानमा क्रिमिनालिष्टिक्स इकाईमा के के को परीक्षण गरिन्छ ?
अप्रील 3, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1